Onyinye mba ụwa: nweta Google Pixel 2 na Pixel Buds n'efu | Gam akporosis
Onyinye ego mba ụwa: nweta Google Pixel 2 na Pixel Buds n'efu
Ọzọkwa na Androidsis anyị nwere obi ụtọ ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ anyị na ịdị adị nke mba ọhụụ ọhụrụ nke ha nwere ike isonye, ​​n'agbanyeghị obodo ha bi, iji nweta ngwugwu ngwaahịa Google mejupụtara ọhụrụ Google Pixel 2 smartphone na ikpọ ọhụụ ọhụrụ Pixel Buds ekweisi.
Itinye aka na raffle a na inweta ezigbo aka nke ndenye iji mee ka ohere ị bụrụ onye mmeri dị mfe. Naanị ị ga-anọgide na-agụ iji mara otu esi eme ya.
Mgbe eserese nke izu gara aga nke etinyebere Google Pixel 2 XL, oge a ọ bụ oge nwanne ya nwoke, ndị Google Pixel 2, nke na-adịghị abịa naanị, ma esonyere a siri ike nwa akwukwo maka Google si kpakpando ngwaahịa nke afọ, na Pixel Buds.
Emeelarịrị ihe ngosi ọhụụ ọhụrụ nke Google na 2017 n’ikpeazụ, ọ bụ ezie na, ugbu a, Google Pixel agaghị erute obodo anyị (nwanne ya nwoke nke okenye) ị nwere ike ịbụ anyaụfụ ndị enyi gị na-eyi otu n’ime ọdụ ndị a nwere nkọwapụta dị elu dị ka asambodo IP67 maka ájá na mmiri na-eguzogide, nke nwere ike ịbụ igwefoto ekwentị kachasị mma na ahịa, Google Lens, a 5.0-inch OLED ihuenyo, otu 2.700 mAh batrị ọ gụnyekwara nkwa nke afọ atọ zuru ezu nke nwelite sistemụ arụmọrụ.
Iji nweta ngwugwu a mara mma nke Google Pixel 2 na Pixel Buds, ihe niile ị ga - eme bụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-enyefe na Njikwa gam akporo ma soro ntuziaka. Cheta na, ka ị na-eme omume karịa, ị ga - enweta mbak karịa N'ihi ya, Ohere karie ị gha agha ibu onye mmeri ma obu onye mmerika. Yabụ, jisie ike !!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ntugharị » Onyinye ego mba ụwa: nweta Google Pixel 2 na Pixel Buds n'efu
na-ekere òkè: sergio crespo
Zaghachi Sergio Brains
Rocco Shades Onyunyo dijo
Zaghachi ka Rocco Shades daa
na-ekere òkè XD
Onyinye ego na ikike Android na DE Android Authority. Amaghị m na ewepụtara gam akporo Androidsis ugbu a maka ịkọwapụta ibe asọmpi iji mee ka mmadụ leta gị.
Zaghachi Miriam Alexandra
Nke a ga-abụ ezigbo mobiles na enyo na-enweghị okpokolo agba
Oppo F5, mobile China nke ga - eme ka ichefu Samsung na iPhone